नि.मा.वि.तहको गणित विषयको नतिजा सार्वजनिक (उर्तिणको नामसहित)
काठमाडौं । निम्न माध्यमिक विद्यालय तहको खुला तर्फ स्थायी पदपुर्तिको लागि शिक्षक सेवा आयोगले असोज १२ गते लिएको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षक सेवा आयोगले गणित विषयको पश्चिमाञ्चल,..
मेगा बैंकमा ४५ जनालाई जागिरको अवसर, असार ६ गतेसम्म अनलाइन आवेदन दिन पाइने
काठमाडौं। मेगा बैंकले ४५ जनाको लागि विज्ञापन खुला गरेको छ। बैंकले उपत्यका भित्र प्रवन्धक तहको एक जना ब्रान्च म्यानेजर माग गरेको हो। त्यस्तै अफिसर तहका लागि ३१ जना कर्मचारी माग..
जनता बैंकमा ६७ जनालाई जागिर खुल्यो, यसरी अनलाईन आबेदन दिनुहोस
काठमाडौं । बैंकमा जागिर खान चाहानेहरुका लागि जनता बैंकले जागिर खुलाएको छ । बैंकले विभिन्न पदका लागि ६७ जना कर्मचारी माग गरेको हो । बैकद्धारा प्रकाशित सूचना अनुसार ब्रान्च म्यानेजरमा ७..
लोकसेवाको कर्मचारी भर्ना गर्ने विज्ञापन रोक्नुपर्छ, संवैधानिक अराजकता भयो : जनार्दन शर्मा
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद जनार्दन शर्माले स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्दै लोकसेवा आयोगको विज्ञापन संविधानविपरीत भएको बताएका छन् । यसलाई तत्काल स्थगित गर्न राज्य व्यवस्था तथा..
सरकारी कर्मचारीलाई हप्तामा दुई दिन बिदा दिन प्रस्ताव, अन्य के छ सुविधा ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले निजामती कर्मचारीहरूलाई हप्तामा दुई दिन बिदा दिन प्रस्ताव गरेका छन्। उनले विधेयकमाथि संशोधन राख्दै शनिबार र आइतबार बिदाको व्यवस्था कानुनी रूपमै राख्न प्रस्ताव गरेका..
Results 878: You are at page5of 30